Iisuti zemango zentwasahlobo ka-2017 | Amadoda aQinisekileyo
Imithetho enesihloko yoLungiso, Umhleli wamva nje weMango unikezelwe kwisinxibo ukusuka kwifemu yasentwasahlobo / ihlobo 2017.
Incwadi yokujonga ekhuthazayo kakhulu ukusuka kulungelelwaniso oluqhelekileyo ukuya kwindibaniselwano ekhululekile elandelayo Isitayile esiphakamileyo / esisezantsi.
Ifemu yaseSpain izimisele ii-silhouettes ezichazwe kakuhle, nangona ilaphu lahlulwe emzimbeni ngokubhekisele kwisitayile esigqamileyo ukuza kuthi ga ngoku, islim fit.
Ukujonga kwinto ebonwe kwingqokelela yamvanje yezona ndlu zibalulekileyo zefashoni, kulindeleke ukuba iimodeli ezikhululekileyo zithathe ulawulo. Nangona kunjalo, iisuti ezixineneyo aziyi ndawo naphi na ngalo mzuzu. Kwingqokelela yeMango entsha, zombini ezi zitayile zihlala ngokudibeneyo.
Iphalethi yombala yenziwe kuphela ziithoni ezingathathi hlangothi, kwaye kunjalo iisuti ziphuma kukukhanya okuninzi, Yile nto ilindelwe kwisuti yasehlotyeni.
Imfihlelo ikwi-shades ekhanyayo eblowu, emdaka nangwevu, nangona kukwakho neminyinyiva yeklasikhi emnyama kunye ne-navy.
I-Bandanas entanyeni, izixhaso kunye nekhola ye-mandarin kunye nejezi endaweni yehempe kunye notayi phefumla ubutshanje kwimbonakalo, ukubasondeza kubantu abancinci, abanombono wokunxiba isuti yahluke kakhulu kuleyo yezizukulwana ezidlulileyo.
Izihlangu ziyahluka phakathi kwezihlangu zokunxiba ezona zuti zintle kunye nezihlangu zezemidlalo kwezona zinto zidibeneyo kwezemidlalo, nangona zihlala zinxitywa ngaphandle kweekawusi, njengoko kufunwa yibhulukhwe yamaqatha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » Imango izisa iisuti zayo entwasahlobo / ehlotyeni ngo-2017
Yintoni eyona nto inomtsalane kumfazi endodeni?